बागलुङको तित्याङमा तामाखानी खाेज्नका लागि बनाइएकाे सुरूङ ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २ चैत्र आईतवार १४:१५
बागलुङको तित्याङमा तामाखानी खाेज्नका लागि बनाइएकाे सुरूङ !
बागलुङको तित्याङमा तामाखानीको प्रारम्भिक अध्ययनका लागि बनाइएको सुरुङ । चीनको जोम्बिङ इन्ड्रेस्टिल कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा शुभम् ग्रुपले ४ महिनादेखि तित्याङमा खानीकाे प्ररम्भिक अध्ययनको काम गरिरहेको छ । तस्वीर – तारानाथ आचार्य/रासस
PREVIOUS Previous post: त्रिशुली नदीमाथि यस्तो पुल !
NEXT Next post: नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टाेलीले नै नेपाली भूमिमा गाडेकाे सीमास्तम्भमा तोडफोड !